Dhaqdhaqaaqa cusub ee 'Rose Rose' iyo booska loo yaqaan 'space coprosesador' Wararka IPhone
IPhone-ka cusub ee 2019 wuxuu kori doonaa qalab koronto-yaqaan R1 ah oo loo yaqaan "Rose"
Toni Cortés | | Qalabka IPhone
IPhone-yada cusub ee 2019-ka ayaa kor u qaadi doona qalab-sameeye cusub oo R1 ah oo loo yaqaan 'Rose'. Apple waxay horey usameysey co-processor cusub oo sumadeysan "Rose" iyo "R1". Qalabkan cusub, oo ay weheliso processor-ka A13, ayaa noqon doona maskaxda iPhones-ka soo socda ee ay berri nagu tusi doonaan.
Ma cadda in magaca Rose iyo R1 uu qayb ka yahay suuqgeynta lagu soo bandhigayo processor-kan cusub, ama haddii ay la jaan qaadi doonto nidaamka lambarrada A-taxanaha ah, Rose aakhirkana waxaa lagu tirinayaa R13.
Sida la xaqiijiyay mahadnaqa isku-darka gudaha ee iOS 13, shaqada ugu horreysa ee copro Rose wuxuu la mid yahay Apple's M-series copro motion, oo siinaya macruufka xogta ku saabsan meesha uu ku yaal terminal-ka booska iyo halka uu ku socdo. haddii aad socoto, ka soo dejinta xisaabiyadan waqtiga dhabta ah processor-ka weyn.
Illaa iyo hadda wax walbaa waxay lamid yihiin, laakiin cusboonaysiinta ayaa ah in Rose ay maamusho xogta dareemayaasha cusub ee horey aan loo daabicin. Xog-hayaha hadda shaqeynaya wuxuu ka maareeyay xogta kombaaska, gyroscope, accelerometer, barometerka, iyo makarafoonnada. Dareemayaasha cusubi waxay noqon doonaan halbeeg cabbir la’aan (IMU), astaamo cusub oo buluug ah 5.1, aallad ballaadhan (UWB), iyo dareeraha kamaradda
Qabashada dhaqdhaqaaqa iyo lasocodka indhaha, kaliya maheli doontid booska aaladda, laakiin sidoo kale waxaad dhigeysaa walxaha dibedda ah sida Apple ee soo socda TAG fows, ama waxaad gacan ka geysan doontaa farsamaynta qarinta aadanaha ee ARKit. Waxay u badan tahay, tan Rose waxay beddeli doontaa isku-duwaha dhaqdhaqaaqa M-taxanaha ah.
Muhiim u ah helitaanka Tilmaamaha Apple
Xogta cusub xagasha imaatinka (AoA) iyo xagasha bixitaanka (AoD) kaas oo bixiya bluetooth 5.1 u ogolow in la ogaado cinwaanka qalab bluetooth dibadda ah, oo lagu daro xog kale, R1 chip wuxuu siinayaa meel aad u saxan oo ah keyrings tracker cusub ee Apple. Tani waa sheeko muhiim u ah iPhone-ka cusub, maaddaama kuwa hadda jira, oo kaliya haysta Bluetooth 5.0, ma awoodi doonaan inay doortaan xogta goobtaas.
Tani waxay ka dhigan tahay taas Haddii aad qorsheyneyso inaad iibsato Apple TAG si furayaashaadu u yaalliin, sidoo kale ka feker inaad cusbooneysiiso iPhone-kaaga kan cusub sanadkaan ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » IPhone-ka cusub ee 2019 wuxuu kori doonaa qalab koronto-yaqaan R1 ah oo loo yaqaan "Rose"
Nalalka Xiaomi waxay helayaan iswaafajin HomeKit oo buuxa